Kudyara bhokisi vatengesi uye fekitori - China Kudyara bhokisi vagadziri
Stylish Stainless simbi yekudyara Bhokisi
Yemazuva ano imba yekushongedza: yedu yemafashoni rectangular flowerpot bhokisi inoratidza maitiro ayo ekushongedza. Yakapusa uye yakashongedzwa. Iyi minimalist dhizaini ine matte nhema poda kupfeka yekuchenesa nyore. Maitiro aya anopokana nekukwaya, marara uye kupunduka.
l Dhizaini: Minimalist rectangular yemaruva bhokisi.
l Kukura kunowanikwa: 16 "x 3.2" x 3.5 ".16" x 8 "x 3.5" .32 "x 3.25" x 3.5 ".kana yakagadzirirwa.
k Finish: Kunogara upfu zvemapuranga matte nhema.
k Logo: Yakasarudzika logo inowanikwa.
k Ruvara: Dema kana Yakasarudzika mavara.
l Kavha: Yakachengeteka kurongedza, brown bhokisi kurongedza, ruvara bhokisi kurongedza kana Yakasarudzika kurongedza.
l Mharidzo nguva: mazuva 5-7. Tichaendesa mberi maitiro acho nguva nenguva.
k Nguva yekugadzira: Kazhinji mazuva 15-20. Nguva yekugadzira inotaurika.
l Kutakura: nendege, negungwa uye nechitima.
k FOB chengarava: Guangzhou chengarava / Shenzhen chengarava.
k Mari yekubhadhara: TT / Paypal / Western Union kana kutaurirana kwekubhadhara.
l Hunhu: hwakagadzirwa nesimbi isingaite ye304, kumucheto kweiri refu rehombodo musoni wakasungwa kuti uve nechokwadi chekuti hari yako yemaruva haina mvura. Uine ukobvu hwe1.5mm, unogona kunzwa hunhu uye kusimba kweichi chidimbu chemaruva. 100% yemhando yekutarisa isati yatumirwa kuve nechokwadi chega chega chinhu chiri kutumirwa mune yakanyanya mamiriro.
l Tenga iyo: Yakakura nzira yekuunza yekunze munzvimbo yako. Yakakwana yekukura zvinotapira, huswa, uye zvidiki zvidyarwa.
l Contemporary Industrial Style: inokodzera chero imba yekushongedza ine yakapusa chimiro uye isina simbi zvinhu.
l Chii chakakosha: Inosanganisirwa 4 yakaderera profile rabha mapedhi - Nyore kuisa, inopa yakawedzera kugadzikana, uye inodzivirira planter uye nepamusoro pekuti iwe unoisa pairi.
l Mumunda webindu system: Rima matsva mahebhu & maveji gore rese kutenderera mune ino yemukati miriwo bindu; Nguva dzose yakachena, nguva dzose yemunharaunda, nguva dzose mumwaka.
k OEM & ODM: Isu tinoita zvese zvakagadzirwa simbi zvigadzirwa, zvakare yedu nyanzvi dhizaini timu inogona kugadzira zvigadzirwa maererano nezano revatengi.
Yemazuva ano Rectangle Kudyara Bhokisi
l Mharidzo nguva: mazuva 5-7.
l Inoshandiswa Kwazvo: Iri windows windows planter bhokisi rinogona kushandiswa nenzira dzakasiyana siyana. Inogona kuve yakanaka yepakati petafura yako yekudyira tafura kana pasherufu yako yemabhuku. Inogona kubata zvidyarwa zvidiki zvakasiyana secactus, zvinwiwa, maruva, uye zvimwe zvakawanda zvinogara dzimba zvinomera. Chigadzirwa chedu hachingobata zvirimwa zvemukati, unogona kuzvishandisa kubata makenduru, kushongedza kwekugezera nezvimwe zvakawanda. Iyo yakakwana kune chero yemukati dhizaini yekuda.
OEM & ODM: Isu tinoita zvese zvakagadzirwa simbi zvigadzirwa. Tine nyanzvi dhizaini timu inogona kugadzira zvigadzirwa maererano nemazano evatengi. Ingotizivisa kana iwe uine chero pfungwa mupfungwa dzako. Tichaita kuti kufunga kwako kuzadzike.
k Pamusoro pedu: Basa redu ndiLASER CUTTING. Isu tinogadzira chero mhando yesimbi chigadzirwa. SHENGRUI inopa yakakwirira-yakajairwa zvigadzirwa uye inoshanda mushure-yekutengesa sevhisi. Kana iwe uine chero mubvunzo nezve zvigadzirwa zvedu, ndapota taura nesu. Isu tinokupa iwe mhinduro nekukurumidza sezvazvinogona.
Yemazuva ano dhizaini yekudyara
Rakareruka asi rakashongedzwa bhokisi rekudyara rinoita chirevo chekushongedza pacharo. Inosanganisira dhayeti gomba - inosanganisira isina musono inodzika saucer. Sanganisira gomba remadhizaini - isa mukati kuvhara gomba rekudhirowa kudzivirira ivhu kubva mukudonha kubva mugomba rekubudisira uku uchibvumidza kukweva nekuchengetedza ivhu kufefetera kusimudzira kukura kwezvirimwa.
Makiyi Ekubata Hook, Wall Hanging Kudyara Bhureki, Dyara Pot Hanger, Bhachi Hanger Rack Hooks, Simbi Madziro Art, Kiyi Hook Murongi,